Madaxweyne ku xigeenka Oppo ayaa iscasilay si uu u noqdo agaasimaha guud ee Realme | Androidsis
Oppo VP wuu is casilay si uu u noqdo agaasimaha guud ee Realme
Sida sharaf iyo Huawei, iyo Nubia iyo ZTE, Oppo wuxuu keenay Realme, shirkada hoosaadka shirkada oo hada yeelatay agaasime cusub. Waxay ku saabsan tahay Sky Li, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Oppo oo hadda iska casilay jagadaas si uu tababar cusub u siiyo Realme.
In kasta oo go'aankani noqon karo wax ka beddel fudud oo shaqaalaha ah marka loo eego wax kasta oo kale, xaqiiqda ah in Oppo uu doonayo inuu siiyo qadarin dheeraad ah shirkadeeda hoosteeda ayaa ah tan ugu muuqata, mar haddii ay xoriyad dheeraad ah u heshay inay ka hawlgasho gobollo kala duwan.
Summad-hoosaadkan ayaa ku dhashay Hindiya bishii May ee sannadkan. Waxay noo keentay Realme 1 oo ah qaabkeedii ugu horreeyay, kaas oo kaliya lagu iibiyay internetka oo keliya.
Realme qorshaheeda muddada-gaaban iyo muddada-dhexe, sida ku cad qoraalka Gartner, oo ay weheliso ku dhawaaqista agaasimaha cusub, waa ballaarinta Afrika, Midwest, qaar ka mid ah suuqyada ka soo ifbaxaya Aasiya, iyo bartamaha iyo bariga Yurub. Tani iyada oo aan laga tagin Hindiya, suuqii ugu weynaa ee ay ka bilaabatay, ayaa illaaween.
Dhinaca kale, shirkaddu waxay rajeyneysaa inay ku guuleysatay 9% koritaanka dhammaadka sanadka, sida lagu sheegay bayaannadii laga soo saaray shirkii jaraa'id ee lagu shaaciyey warkan. Iyada oo taa laga duulayo, waxaa laga yaabaa inaad bilowdo qalab leh astaamo indhaha soo jiidan kara iyo qeexitaanno si aad uga dhawaajiso khariiddadaada cusub isla markaana aad u hesho dareenka shacabka wax cunaya
Isagoo ka hadlaya wax badan oo ku saabsan Realme, shirkaddu waxay leedahay fikrad cad: in lagu tartamo suuqa dhexe ee moobiilka. Tani, oo looga uuraysto Hindiya - aag soo ifbaxaya - oo loogu talagalay dadweyne aan lahayn ilo dhaqaale, waxay qorsheyneysaa inay ku sii socoto isla xariiqda lagu fuliyo Realme 1, taas Ujeeddadeedu ma noqon doonto mid kale oo aan ahayn in ay noo soo bandhigto moobiillada dhexdhexaadka ah oo leh qiime qiimo jaban sida Oppo caadiyan u sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Oppo VP wuu is casilay si uu u noqdo agaasimaha guud ee Realme